Translate Filipino to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Filipino to Myanmar (Burmese), Filipino to Myanmar (Burmese) translations, Filipino to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Hello, kumusta ka မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Mayroon bang sinuman? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Mahal na mahal kita talaga ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Magkano ang gastos ng hamburger na ito? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Maaari mo bang tawagan ako ng taxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
pasensya na ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Excuse me တဆိတ်လောက်
interesado ako ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Ang aking flight ay naantala အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Narito ako para sa negosyo ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Kamusta? Ang pangalan ko ay မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Ikinalulungkot ko, pero kasal ako ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Gusto kong hilingin sa iyo ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Maaari mo bang dalhin ako sa paliparan? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Ano ang oras ngayon, pakiusap? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Saan ang pinakamalapit na istasyon ng pulisya? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Maaari ba akong humiram ng charger ng iyong telepono mangyaring? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Matutulungan mo ba ako? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Order mo ako ng inumin, please? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Magkano iyan? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ako ay allergic sa gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Tumawag sa isang doktor ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Mayroon bang doktor? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Maaari ba akong tumawag? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Tumawag sa akin ang iyong boss mangyaring. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ang lugar na ito ay napakabuti ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Dalhin mo ako sa hotel mangyaring ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Ano ang numero ng aking silid? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?